lulu: မှိုပင်စိမ်းမွှေး အစပ်ချက်
at 6:25 PM Labels: သတ်သတ်လွတ်, ဟင်းရံ
ချစ်သောမောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ တစ်လောတုန်းက အလုပ်ကများ၊ လူကလည်း နည်းနည်း နေမကောင်းဖြစ်သွားတာမို့ ဘလော့ဂ်ဘက်ရော ဖေ့်စ်ဘွတ်ခ် ဘက်ရော မလှည့်နိုင်ဖြစ်သွားတယ်နော်။ အချိန် အကြာကြီး ပစ်ထားလို့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။ ဒီနေ့တော့ မောင်နှမတို့ကို သတ်သတ်လွတ်ဟင်းလျာလည်းဖြစ်၊ ထမင်းလည်းမြိန်စေမယ့် မှိုပင်စိမ်းမွှေး အစပ်ချက်လေး ချက်ကျွေးပါရစေဦးနော်။
မှိုဝယ်လို့ရပြီဆိုရင် ကန်စွန်းရွက်နဲ့တွဲပြီး ကြော်လိုက်တာက အမြဲလိုလိုမို့ ဒီတစ်ခါ အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်ရအောင် မှိုကို ဟင်းလေးလို ချက်စားမယ်ဆိုပြီး ချက်ဖြစ်တဲ့ဟင်းလျာလေးပါနော်။ အမေက ကန်စွန်းရွက် နဲ့ကြော်မယ်တဲ့၊ လုကတော့ အမေရယ် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားရအောင် ချက်စားရအောင်နောလို့ဆိုတော့ သူပဲ ထွင်နိုင် လွန်းတယ်တဲ့။ မှိုကို အသုပ်လည်း လုပ်သေး၊ အရည်သောက်လည်း လုပ်သေး၊ အခု ဟင်းလိုမျိုး ချက်ဦးမယ်တဲ့။ စိတ်ကြိုက်ပဲ၊ သဘောရှိပဲတဲ့ ချက်ချင်သလိုသာချက်၊ တစ်ခါတည်း များများချက်၊ ဆွမ်းဟင်း လည်းလောင်းရအောင်၊ ထမင်းချိုင့်လည်းထည့်၊ အိမ်သားတွေအားလုံး စားကောင်းအောင်လို့ ချက်ပါတဲ့။ ပါမစ်ရပြီဆိုတော့ ချက်ပြီပေါ့နော်။
လိုအပ်သောပစ္စည်းများကတော့ ကောက်ရိုးမှို၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီ၊ ပင်စိမ်း ရွက်၊ ငရုတ်သီးစိမ်း၊ ဆား၊ နနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်၊ ပဲငံပြာရည်အကျဲ၊ ဟင်းခတ်မှုန့် အနည်းငယ်၊ ဆီအနည်းငယ် တို့ပါနော်။
ကောက်ရိုးမှိုအလုံးလေးတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့ လေးစိတ်ရအောင် လှီးပါနော်။ ခရမ်းချဉ်သီးကိုလည်း မထူမပါးလေးလှီးပေးပါနော်။ ကြက်သွန်ဖြူနီတို့ကို အခွံနွှာ ရေဆေးပြီး မညက်တညက်လေး ထောင်းပေးပါနော်။ ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလည်း အညှာခြွေ၊ ရေဆေးပြီး မညက်တညက်လေး ထောင်းပေးပါ။ ပင်စိမ်းရွက်လေးလည်း ရေဆေးပေးပြီး အညွန့်လေးတွေနဲ့ အရွက်လေးတွေ ခြွေယူထားပါနော်။
အားလုံးအသင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင် မီးဖိုပေါ် ဒယ်အိုးတင်၊ ဆီထည့်၊ ဆီပူလာရင် နနွင်းမှုန့်လေးနည်းနည်းခပ်၊ မီးအားကိုလျှော့ပြီး ထောင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနီငရုတ်သီးစိမ်း တွေထည့်ပြီး ဆီသတ်၊ ငရုတ်သီးစိမ်းပါတာမို့ သတိထားပြီး မီးအားကို လျှော့နော် မဟုတ်ရင် မွှန်ကုန်မှာစိုးလို့နော်။ ပြီးရင် ခရမ်းချဉ်သီးတွေထည့်ပြီး ဆီသတ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးက အားလုံး ကြေစရာမလိုတော့ နွမ်းပြီဆိုရင် မှိုလေးတွေထည့်၊ မီးအားကို ပုံမှန်ပြန်ထား၊ ဆား၊ သကြား၊ ပဲငံပြာရည်အကျဲလေး ထည့်ပြီးတော့ အားလုံးသမအောင်မွှေပြီး ဒယ်အိုးဖုံးအုပ်ပြီး တည်ပေး ပါနော်။ သုံးမိနစ်လောက်ကြာရင် ဒယ်အိုးအဖုံးဖွင့်ပြီး တစ်ခါထပ်မွှေ၊ ပြီးတော့မှ မှိုအိပြီလား ကြည့်၊ အအိလိုသေးရင် ရေနွေးလေး နည်းနည်းလေးဖျန်းထည့်ပြီး အိအောင်ချက်၊ ပြီးတော့ အပေါ့အငန်မြည်း၊ လိုတဲ့အရသာ ထပ်ဖြည့်ပြီး ပင်စိမ်းလေး အုပ်လိုက်ပါနော်။
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံလှတဲ့ မှိုပင်စိမ်းမွှေးအစပ်ချက်လေး ရပါပြီ နော်။ ရုံးကို ထမင်းချိုင့်ထည့်လာတော့ မိတ်ဆွေတွေက စားကောင်းတယ်ပြောလို့ အရမ်းကို ပျော်သွားတာ။ မောင်နှမတွေလည်း ချက်စားလို့ရအောင်လို့ နည်းလေး မျှဝေလိုက်ပါပြီနော်။ အားပေးကြပါဦးနော်။
Han Kyi August 31, 2010 at 7:23 PM
subuueain August 31, 2010 at 9:35 PM
မမရေ ညီမလည်းချက်စားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ပင်စိမ်းအလွယ်တကူမရတော့ မမလုလောက် စားမကောင်းဘူး။ မလုလက်ရာလေး စားချင်လိုက်တာ..
Anonymous September 1, 2010 at 7:38 AM
lu lu you are cute,
rose of sharon September 1, 2010 at 11:09 AM
မြူးမြူး September 1, 2010 at 11:23 AM
မှိုကို ခ၀ဲသီးလေးနဲ့ ချက် ငရုတ်သီးစိမ်းလေးခြမ်းပြီးထည့် ပင်စိမ်းလေးအုပ်ပြီးစား အရမ်းကောင်းတယ်.. ချက်စားကြည့်ပါလာမမလု..
ပုဇွန်ချဉ်လုပ်ဖို.အတွက်လိုအပ်တာတွေက ပုဇွန်၊ဆား၊ ထမင်းကြမ်းခဲ အဲ.ဒါတွေဘဲလိုတာမဟုတ်လားဟင်၊
မလုပြောသလိုဘဲ တထေရာထဲလုပ်တာကိုဘဲ ပုဇွန်ကမချဉ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ရန်ကုန်ကလို ပုဇွန်ချဉ်အရသာမျိုးမရဘဲနဲ. ငံတဲ.အရသာဘဲရနေတယ်။ဘာလို.လဲတော.မသိဘူး။
ကျမက ဂျပန်မှာနေတာပါ။ ဒီမှာရှိတဲ.ပုဇွန်တွေနဲ.ဘဲလုပ်ရတာဆိုတော. နောက်ဆုံးစဉ်းစားကြည်.တာတော. ရေချိုပုဇွန်နဲ.ရေငန်ပုဇွန် ကွာသလားမသိဘူးနော်။
အဲ.ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်။ ဆားလျှော.ထည်.ရမလားမသိဘူးနော်။ မချဉ်ဘဲနဲ. ငန်တဲ.အရသာဘဲထွက်နေလို.လေ။
ကူညီပါဦးနော်။ လုပ်ကြည်.နေတာ 4ခေါက်လောက်ရှိပြီ။
အခုလဲနောက်တခေါက်လုပ်ထားသေးတယ်၊ဆားလျှော.ထည်.ကြည်.ထားတယ်။မမိုးကောင်းသူရေးဖူးတဲ.အချဉ်တည်နည်းတွေထဲမှာတော. ဆားနည်းရင်လဲစားလို.မကောင်းဘူးဆိုလို. ပုံမှန်ထက် နည်းနည်းဘဲပိုထည်.တာပါဘဲ။ အများကြီးလဲမထည်.ပါဘူး။
လုလု September 3, 2010 at 11:19 AM
ညီမလေးရေ့့့  ပုစွန်ချဉ်လုပ်တာ မလုတို့အိမ်မှာလည်း အဲ့ဒီနည်းအတိုင်းပဲ လုပ်တာပါပဲနော်။ မချဉ်ဘဲ ငန်နေတယ်ဆိုတော့ တော်တော်လေး ထူးဆန်းနေတယ်။ ငန်တာကရော တော်တော်လေး ငန်နေသလား။ တကယ်လို့ အရသာက ပုံမှန်ငန်တာမျိုးပဲဆိုရင်တော့ မချဉ်ဘူးဆိုရင် အချဉ်ညှစ်ပြီး သုပ်ရင်ကော ဘယ့်နှယ့်နေမလဲ။ ပုစွန်ကရော ကျက်သွားရဲ့လား ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရှိနေလဲနော်။ အဲ့ဒါလေးတွေ သိချင်လို့ပါ။ mee.pho.saung@gmail.com ကို အက်ဒ်လုပ်လိုက်ရင်တော့ အပြန်အလှန်မေးကြ ဖြေကြ လုပ်လိုက ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ အဆင်ပြေရင် အက်ဒ်လုပ်လိုက်ပါနော်။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) September 4, 2010 at 3:15 PM
မှိုပင်စိမ်းချက်လေးက မွှေးလိုက်တာ လုလုရယ်
တံတွေးကိုလည်း ဂလုလို့တောင် မြိုမိတယ်...
ဒီမှာလည်း မှိုကတော့ ပေါတယ်လေ
ပင်စိမ်းလဲ ရှိတယ်။။အနံ့တော့ ပြင်းတယ်..
Margaret Joe May 7, 2011 at 12:39 PM